Doodo: Ducada Diplomasku waxay ku jirtaa xilligan ugu dambeeya "Wadamo badan, Dibloomu waxay u muuqdaan inay qaataan aqoonta dhabta ah, kartida iyo qiimaha leh ee haysta" Hase ahaatee waa warqad fudud oo kaliya ... ( VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Nofembar 17, 2018 00: 20 No Comments
"The dooddu way furantahay! »
Ku saabsan dibloomaasiyada, waxaan maqalnaa in dadku ku faanaan maalinta oo dhan: "LMid baa odhan doona, Waxaan kaa sarreyn doonaa heerka darajada, tan kalena waxay igu odhan doontaa, waxaan ka qaatay dibloomaasiyaddayda jaamacad weyn, tan kalena wali aniga, waxaan haystaa autant ... ". Dhamaan shahaadooyinkaan… Maxaa loo sameeyaa?
Iyadoo aan la ixtiraamaynin dadka haysta shahaadooyinka waa weyn ama kuwa ka soo qaybgalay jaamacadaha waaweyn, shahaadadu waa uun mala awaal aqoonta ee madaxa hayaha.
Shuruuda looga baahan yahay diblooma ayaa imaneysa markaa, in bulshada casriga ah, qof aan haysan diblooma xaq u lahayn inuu shaqeeyo ama la shaqaaleeyo. Lahaanshaha dibloomaha waa hal shay, laakiin difaac ahaan xirfad ahaan waa wax kale. Thomas Edison, Bill Gates, Beyoncé, Oprah, Dekaba ... Weligood ma sameyn daraasado waaweyn, laakiin faa'iidooyinkooda sayniska kama joogsanayaan taabashada waqtiga saxda ah ee nolosha aadanaha oo dhan.
Dibloomadu waa maragga socdaal tacliimeed, laakiin dammaanad kama qaadin waddaniyadda shaqsiga si loo hubiyo weynaanta waddankiisa.
By, Archbishop Ben Lobobo
Sep28 04: 25
HI / LO: 21/18 ℃
HI / LO: 19/16 ℃
Ignatius Sancho (1729-1780), wuxuu ku dhashay markabkii addoonka ee hooyadiis ka kaxeeyay Afrika oo geeyay gumeysigii Isbaanishka ee New Granada (Kolombiya): ilaa 1731, cunuggu wuxuu yimid Greenwich, xaafadaha London iyo u adeegay addoon ahaan wuxuuna bartay akhriska keligiis
Sebtember 27, 2020 17: 20
Julius Soubise (1754-1798), wuxuu ku dhashay addoon magaalada Saint-Christophe (Saint-Kitts) sanadkii 1754; waxaa la iibsaday isaga oo 10 jir ah isagoo ah ergey u ah Duchess of Queensbury, oo ah nin dabiici ah isla markaana bini aadam ah kuna jirta da'da lixdameeyadii. marka lagu daro tababaro aad u horumarsan oo deyn ah, Soubise waxay sidoo kale heshay casharo ku saabsan violin, fuulitaanka faraska iyo majaajillada ”
Sebtember 27, 2020 15: 15
Bénito Sylvain (Marie-Joseph Benoît D'Artagnan Sylvain dit), oo ku dhashay 1868 Port-de-Paix (Republic of Haiti) wuxuu ku dhawaaqay inuu yahay wakiilka Afrikaanka iyo Afro-faransiiska oo Faransiisku gumeystay. Sidaa darteed waxaan u tixgelin karnaa isaga inuu ka mid yahay hormuudka Pan-Africanism.
Sebtember 27, 2020 13: 08
Jean-Baptiste Belley (1746-1805), wuxuu ku dhashay Gorée (Senegal), waxaa la iibiyey isagoo jira labo sano, waa la mastaafuriyey oo waxaa lagu addoonsadey Saint-Domingue (Jamhuuriyadda Haiti): isagoo ku shaqeynaya mihnada timaha , laguna yaqaanay Cape Town magaceeda hoose ee Timbazé, wuxuu ku guuleystay, inuu shaqeeyo habeen iyo maalin, si uu u badbaadiyo lacag uu ku furto xoriyadiisa
Sebtember 27, 2020 11: 22